Dhallinyarada oo Khamriga looga Iibiyo Geerashyada gawaarida - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhallinyarada oo Khamriga looga Iibiyo Geerashyada gawaarida
La daabacay tisdag 5 juni 2012 kl 10.23
Khamriga kiisa fudud iyo midkiisa culus ayaa dhallin-yarada si furan looga iibiyaa goobaha lagu baarkingareeyo gawaarida xammuulka. Khamrigaa oo laga soo waarido dalka dibaddiisa ayaa laga sii iibiyaa kolka dalka la soo geliyo dhallaanka iyo dhallinyarada aan qaan-gaarin. Wiil 15-jir ah ayaa weriye ka tirsan laanta wararka ee Ekot uga war-bixiyay sida uu isaga iyo saaxibbadiiba uga helaan khamriga goob gawaarida xamuulka la dhigo ee dhaca bannaanka magaalada Göteborg.
- Markaannu u tagno ayaan niraahnaa un "Vodka", maadaama aaney qaarkood afka iswiidhioshka garaneyn. Waa ey noo soo saaraan, waxey noo sheegaan qiimaha, kadib halkaa ayaan ku kala tagnaa, sida uu sheegay 15-jirku.
Sidoo kale waxaa jira habab kale oo ey dhallin-yaradu khamri ku haleeli karaan, marka laga yimaado gawaarida xamuulka ee iibiya, kuwaasina oo ka hela macaash aad u ballaaran.
Magaalada Göteborg ayay ku taalaa xarun lagu magacaabo Xarunta Istiig (Stig Center). Goobtaasina oo ciidanka ammaanku ka ilaileeyaan waxyaabaha dhacaya. Håkan Breding, waa madaxa laanta ammaanka ee xaafadda Backa, halkaasina oo ay dhacdo goobta laga hadlayo:
- Haa, waa goob uu ku badan yahay socodka dhallin-yaradu, qaasatan maalmaha fasaxyada la yahey. Waxey dhallin-yaradaasi dhex gashaa gawaarida halkaasi ku baarkingareeysan oo ey khamri ka soo iibsadaan, sida uu sheegay Håkan Breding.